Roa no maty tany Ikelivozona (RN 7) : namono olona indray ny… Sprinter (NewsMada) | AEMW
Roa no maty tany Ikelivozona (RN 7) : namono olona indray ny… Sprinter (NewsMada)
Fahavakisan’ny kodiarana aloha. Izay no voalaza fa antony nampivadika ity taksiborosy Sprinter, teo anelanelan’Ankelivozona sy Sambaina (RN 7), afakomaly ity. Vokany, mpandeha roa no namoy ny ainy, ka ny iray maty tsy tra-drano.
Taksiborosy Sprinter iray no tratran’ny lozam-piarakodia tao anelanelan’Ankelivozona sy Sambaina, afakomaly tolakandro. Olona roa indray namony ny ainy. Ny iray maty teo noho eo raha namoy ny ainy tany amin’ny hopitalin’Andranomadio Antsirabe. Olana ara-teknika no antony nahatonga ny loza, araka ny fanazavana voaray. Vaky tampoka teny am-pandehanana ny kodiaran’ny fiara ary nitarika ny fivadihan’ny fiara ambony ambany ka nahatonga izao loza mahatsiravina izao. Voalaza fa hihazo any Fianarantsoa ity fiara ity, saingy tratran’ny loza tampoka. Naratra avokoa ny ankamaroan’ireo mpandeha tao anaty fiara, saingy ireo namoy ny ainy ireo no tena voa mafy ka nitarika hatramin’ny fahafatesana.
Tsy nisy natahorana kosa ny ain’ireo naratra fa avotra soa aman-tsara na teo aza ny ratra samihafa toy ny fahatapahana sy ny folaka.
Tsy voafehin’ny mpitondra fiara ny Sprinter…
Tsikaritra tato ho ato fa miverina indray ny lozam-piarakodia eny amin’ny lalam-pirenena. Lohalaharana hatrany ny fiara Sprinter izay tsy mbola voafehin’ny mpamily ny mitondra ity karazana fiara iray ity sady tsy mety amin’ny lalana eto amintsika ihany koa. Manginy fotsiny ny famadihana azy ireny ho fiara fitateram-bahoaka nefa tsy mifanaraka amin’ny fenitra takin’ny fitateram-bahoaka izy itony na eo aza ny hatsaran’ny fiara sasany. Ny mpandeha hatrany no mitondra faisana amin’ny tandrevaka ataon’ny mpamily. Matetika koa tsy voara-mason’ny mpamily intsony ny fikojakojana ny fiara (ny kodiarana hatrany anaty maotera) noho ny fitadiavam-bola sy ny fanenjehana versement, hany ka efa mitranga ny loza vao taitra. Efa nisy lalàna napetraky ny tompon’andraikitra teo aloha teo momba ny mpamily sy ny kaoperativa, raha toa ka misy fiara iray mamono olona ao amin’izy ireo. Sao tokony hamafisina indray izany mba hialana amin’ny loza mateti-pitranga toy izao.
← Sourds et muets (NewsMada)
Toy ny bokotr’akanjo e… (NewsMada) →